ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက် အက်ရှင်ဇာတ်ကား ဒါရိုက်တာဂျိုး နေမျိုးအောင်၊ ဖူးပွင့်သခင်၊မင်းချစ်ကို၊ချစ်တိုး - Ruslar.Biz
ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက် အက်ရှင်ဇာတ်ကား ဒါရိုက်တာဂျိုး နေမျိုးအောင်၊ ဖူးပွင့်သခင်၊မင်းချစ်ကို၊ချစ်တိုး
Смотреть видео ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက် အက်ရှင်ဇာတ်ကား ဒါရိုက်တာဂျိုး နေမျိုးအောင်၊ ဖူးပွင့်သခင်၊မင်းချစ်ကို၊ချစ်တိုး на Ruslar.Biz бесплатно
Aung Thiri Entertainment Youtube Channel မှ မြန်မာဇာတ်ကားကောင်းများ၊ ဇာတ်လမ်းတွဲများ၊ ဇာတ်လမ်းတိုများနှင့် အခြား အစီအစဉ်ပေါင်း များစွာကို တရားဝင် အခမဲ့ တင်ဆက်ပေးမှာမို့ Like & Subscribe လုပ်ထားဖို့ မမေ့နဲ့နော်။ ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် ပရိသတ်ကြီးရဲ့ အမြင်များကိုလည်း comment မှာ ရေးပေးခဲ့အုံးနော်။ သတိပေးတားမြစ်ချက် Aung Thiri Entertainment Youtube Channel တွင် တင်ဆက်ပြသနေသော ရုပ်ရှင်/ဗီဒီယိုများအား တစ်ကားလုံး ဖြစ်စေ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ဖြစ်စေ ကူးယူခြင်း၊ Youtube,Facebook အစရှိသော social media များပေါ်တွင် ပြသခြင်း ရောင်းချဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ အကျိုးစီးပွါး ပျက်ဆီးအောင် ပြုလုပ်ခြင်းများကို လေးနက်စွာ တားမြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်သူအား ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ဗီဒီယို ဉပဒေ ပုဒ်မ ၃၃(ခ) ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး ဉပဒေပုဒ်မ ၆၆(ဂ) ဖြင့်သော်လည်းကောင်း တည်ဆဲ ဉပဒေ ပုဒ်မ တရပ်ရပ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း လိုအပ်သလို တရားစွဲဆို အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားပါမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ #Myanmarmovie #Newmyanmarmovie #aungthiri
Aung Thiri Entertainment |4нд.
Aung Thiri Entertainment Youtube Channel မှ မြန်မာဇာတ်ကားကောင်းများ၊ ဇာတ်လမ်းတွဲများ၊ ဇာတ်လမ်းတိုများနှင့် အခြား အစီအစဉ်ပေါင်း များစွာကို တရားဝင် အခမဲ့ တင်ဆက်ပေးမှာမို့ Like & Subscribe လုပ်ထားဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် ပရိသတ်ကြီးရဲ့ အမြင်များကိုလည်း comment မှာ ရေးပေးခဲ့အုံးနော်။
Aung Thiri Entertainment Youtube Channel တွင် တင်ဆက်ပြသနေသော ရုပ်ရှင်/ဗီဒီယိုများအား တစ်ကားလုံး ဖြစ်စေ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ဖြစ်စေ ကူးယူခြင်း၊ Youtube,Facebook အစရှိသော social media များပေါ်တွင် ပြသခြင်း ရောင်းချဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ အကျိုးစီးပွါး ပျက်ဆီးအောင် ပြုလုပ်ခြင်းများကို လေးနက်စွာ တားမြစ်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်သူအား ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ဗီဒီယို ဉပဒေ ပုဒ်မ ၃၃(ခ) ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး ဉပဒေပုဒ်မ ၆၆(ဂ) ဖြင့်သော်လည်းကောင်း တည်ဆဲ ဉပဒေ ပုဒ်မ တရပ်ရပ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း လိုအပ်သလို တရားစွဲဆို အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားပါမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
#Myanmarmovie #Newmyanmarmovie #aungthiri
စောင်းကြိုးရှိုက်သံ (စဆုံး) လူမင်း ညီထွဋ်ခေါင် ခိုင်သင်းကြည် ဆုအိမ့်စံ ချိုပြုံး...
Myanmar Movies - မမေ့နဲ့နော် (ကျော်ဟိန်း၊ထိန်းအိန္ဒြာဗို)...
ထပ်ဆင့်မီး / ထပ္ဆင့္မီး
ကတိတစ်ခုရဲ့ဒဏ်ရာ အက်ရှင်ဇာတ်ကား နေမျိုးအောင် ထားထက်ထက် နှင့်သရုပ်ဆောင်များစွာ...
သူ့မျက်နှာနဲ့ကျွန်တော်(အက်ရှင်)- နေမျိုးအောင်၊ အောင်ပိုင်၊ သူရိယ၊ အေးမြတ်သူ၊ ပတ္တမြားခင်...
အသည်းကွဲအိမ်ရှင်မတို့အားကိုးရာ(အပိုင်း၁)A Thae Kawel Eain Shin Ma Ar Koe Yar (Part 1)လူမင်း...
ဆုံနိုင်ခွင့်(စဆုံး) လင်းမြတ်မင်း အေးမြတ်သူ အိစိကွေး အေးမြဖြူ သရုပ်ဆောင်များ...
မြန်မာဇာတ်ကား - အမုန်း၏နောက်ကွယ် (လူမင်း၊နန်းဆုဦး)...
မြန်မာဇာတ်ကား အရိုင်းအစိုင်း နေမျိုးအောင်/နေန...
Добавлено: 1 мес. 3Movie Entertainment 1 мес.
ပင်လယ်မုဆိုး အက်ရှင်ဇာတ်ကား(စဆုံး) နေထက်လင်း ...
Добавлено: 1 мес. Aung Thiri Entertainment 1 мес.
ခွပ်လက်-(အက်ရှင်ကား-စ/ဆုံး) ခန့်စည်သူ ရဲအောင်...
Добавлено:4нд. Arr Mann Entertainment4нд.
ရွှေစင်ဦးရုပ်ရှင် | အနက်ရှိုင်းဆုံး | The De...
Добавлено:2мес. Shwe Sin Oo motion picture2мес.
အမုန်းမြို့မှအပြန် (စ/ဆုံး) ခန့်စည်သူ စိုးမြတ...
ဒုသနသော(စဆုံး) ခင်လှိုင် လင်းမြတ်မင်း အံ့မင်း...
Добавлено:2мес. Aung Thiri Entertainment2мес.
စီးချင်းထိုးတဲ့ကောင်းကင်(အပိုင်း၁)See Chinn H...
Добавлено: 1 мес. Shwe Myat Chel Media 1 мес.
ရွှေစင်ဦးရုပ်ရှင် | သု၀ဏ္ဏဒေဝီထိပ်ထား | Thu ...
ငနင်းပြား - အပိုင်း ၁ (Nga Nin Pyar - Part 1)...
Добавлено: 1 мес. Cat World Movie 1 мес.
Добавлено: 10 мес. Look Media 10 мес.
ကောင်းကင်နှစ်စင်းရဲ့လမင်း - Kaung Kin Nha Si...
Добавлено:3мес. Bo Bo Entertainment3мес.
ရွှေနံ့သာစံအိမ်(အပိုင်း၁)Shwe Nant Thar San E...
Добавлено:4мес. KGK Youtube-Channel4мес.
မြေဝါတောင်နတ်မင်း(အပိုင်း၁)Myay War Taung Nut...
Добавлено:4нд. Shwe Myat Chel Media4нд.
Добавлено:2мес. Arr Mann Entertainment2мес.
Добавлено:2год. Mahar2год.
မြန်မာဇာတ်ကား ထန်းပင်ထက်ကကျောက်သင်ပုန်း နေမျ...
Добавлено:4нд. 3Movie Entertainment4нд.
ရွှေစင်ဦးရုပ်ရှင် | မာယာအပြင်းစား | The Inte...
Добавлено:4нд. Shwe Sin Oo motion picture4нд.